च्वास्स पोल्ने सिस्नोको अत्मिय फाइदा ! - Jhilko
च्वास्स पोल्ने सिस्नोको अत्मिय फाइदा !
१ मंसिर,२०७६ 115 0
च्वास्स पोल्ने सिस्नो प्रायः सबै ठाउँमा पाइन्छ । यसमा रहेको औषधि गुण र प्रभावकारीका कारण पछिल्लो समय सहरी क्षेत्र, होटल र रेष्टुरेन्टमा समेत यसको प्रयोग बढ्दो छ । सिस्नोलाई सुकाएर बनाएको धुलो सुपरमार्केटहरुमा प्याकमा समेत किन्न सकिन्छ ।
१० ग्राम सिस्नोको धुलोलाई करिब दुई सय मिलिलिटर तातोपानीमा रातभरि भिजाएर भोलिपल्ट बिहान खालि पेटमा खाँदा फाइदा पुर्याउँछ । सिस्नोमा ‘ए’, ‘सी’ र ‘डी’ भिटामिनसँगै पोटासियम र क्याल्सियमजस्ता पौष्टिक तत्व पाइन्छ । यसमा करिब २५ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ । यसमा आइरनसमेत पाइन्छ ।
सिस्नोमा फाइबरसमेत हुन्छ, जसले खाना पचाउन सहयोग गर्छ । सिस्नोले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासमेत बढाउँछ । मधुमेहको रोगीका लागि सिस्नो लाभदायक हुन्छ । सिस्नोको धुलोलाई दाल र सुप बनाएरसमेत खान सकिन्छ । हरियो सिस्नोको मुन्टा टिपेर तरकारीको रूपमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ ।
सिस्नो खानाले किड्नीको समस्या हुनबाट जोगाउन सघाउँछ । पिसाब पोल्ने समस्या छ भने सिस्नोको सुप लाभदायक हुन्छ ।
दम, बाथरोग, रगत उत्पादन गराउने, शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउनसमेत यसले सघाउँछ । सिस्नोको लेदोलाई मेहन्दी बनाएर कपालमा लगाउँदा कपाल झर्ने समस्या कम हुन्छ । भाँचिएको तथा मर्केमा, हाड जोड्न, हाड–जोर्नी दुखेकोमा पनि सिस्नो उपयोगी हुन्छ ।
श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा गोटाबाया राजापाक्षे विजयी
फेरी वर्षा र हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान
३ पुष,२०७६053
सोमबार अपरान्हबाट नेपालको पश्चिमी भू–भागमा प्रवेश गरेको उक्त प्रणालीको प्रभावले...
६ श्रावण,२०७६0157
सप्तरीका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले मालवाहक सवारीसाधनलाई विद्युतीय माध्यमबाट...
चीनमा कमल थापाको धमाकेदार प्रदर्शन
७ कार्तिक,२०७६0150
चीनको सेन्जेन सहरमा शनिबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा राप्रपा अध्यक्ष थापाले चीनका...
सप्तरीबाट कुनै प्रश्नपत्र नबाहिरिएको दाबी
७ चैत्र,२०७५0314
जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सप्तरीले एसईईको कुनै पनि प्रश्नपत्र सप्तरीबाट नबाहिरिएको...